Upplýsingasíða er að finna í WordPress og sjáðu um þessa tegund af Lego.
Waxaad aragtaa waxa aad rabto inaad ku guuleysato, qeexdo qaybaha lagama maarmaanka ah, oo ka dhig dhammaan wadajirta dhulka. Hase-yeeshe, caqabada koowaad, si kastaba ha ahaatee, waxay hubineysaa í vax walba ay ku habboon yihiin si siman iyo si aan kala go ‘lahayn.
Í þessari færslu geturðu notað FTP (File Transfer Protocol) til að nota það sem þú vilt nota WordPress..
0.6 5. Guðbi 4
Isticmaalka Macaamiisha FTP er í miðju ka miðju ah mowduucyada yaryar ee la yaqaan ee horumarinta webka casriga ah, þú getur notað WordPress. Tani waxay badanaa sababtoo ah nidaamyada maareynta maadooyinka waxay si aad ah u fududeeyeen habka dhismaha.
Waqtigii hore, horumariyayaashu waxay ubaahanayeen macaamil FTP ah si ay u faylaliyaan faylasha shabakadahooda shabakadooda waxayna ka dhigi karaan inay isticmaalaan dadka isticmaala – inay ka helaan hantida muuqhala kala kila kila kila.
Maanta, dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso waa gundhig u sameynta jaangooyada WordPress, soo qaado mawduuc, oo aad abuurto nuxur adigoo adeegsanaya interface muuqaal ah. Vaxa kale oo ay fududahay í lagu daro farsamooyinka iyo sii wado boggaaga adoo ka caawinaya viðbætur, þú vilt líka að þú getir rakibay bakhaarka rasmiga a ee ee WordPress.
Ég er ekki eins og kashaqeyneyso koodhka oo aad hayso ilahaaga cusub, CMS er ekki annað en fulayaan hawlahaas eins og saacadaha shaqada. Laakiin haddii aad tahay nooca horumariye ee jecel fikradaha banaanka-ka-sareeya og koritaanka maxkamadaynta iyo qaladka, adiga waxay la kulmi kartaa khaladaadka qaarkood taas ayaa kaa xiri doonta CMS-gaaga. Tani waxay kaa saari doontaa ikhtiyaar la’aan laakiin inaad isticmaasho macaamil FTP ah oo wax ka qabato arinta gacanta.
Ég vil líka, þú getur notað Macaamiisha sare ee FTP til að skrifa WordPress:
Jiid-iyo-Jooji bókamerki – Xayaysiinta waa muuqaal heer sare ah oo u sahli kara horumarinta inay diyaariyaan xisaabtooda FTP. Iyada oo CyberDuck ah, muuqaalka buuggu wuxuu isticmaalaa jiidis iyo Kala-dhex-dhexaad ah – si sahlan loo isticmaalo heerarka cusub.
Dulritunaraðili – Þú getur líka notað CyberDuck til að nota SFTP (Secure SSH File Transfer Protocol). Laakiin xitaa haddii aad rabto inaad la socoto FTP, waxaad wali þú getur sent upp Cryptomator app, þú getur líka notað og notað til að nota codesi ah oko og saabsan server servera kasta ama hannaanka kaydinta daruuriga.
Isdhexgalka Dibedda – Haddii aad caadeysantahay inaad isticmaasho codsi tafatir oo gaar ah, waxaad si sahlan u geli mapa kaabayaasha CyberDuck. Tani waxay kudhacaysaa dhammaan koodhkaaga ogyo hawlaha waxqabadka.
Aqalka Bar – FTP bilaash ah ayaa ku yimaada barta xaalad-dhab ah oo bandhigaysa hannaan joogto ah iyo sidoo kale macluumaadka ku saabsan faylka hadda la doortay. Tani waxay kaa horjoogsataa inaad vax ka beddesho, tirtirto, ama aad u guurto faylal badan oo shil ah.
Dhamaynta Xeerka – Waxaa muhiim ah í la ogaado í tifaftiraha dhismaha ee nuqulkii lacagta la bixiyay uu ku yimid muuqaal gaar ah oo dhameystiran. Kaliya taasi ma badbaadin doonto waqti, laakiin waxay sidoo kale ka hortagi doontaa qaladaadka qalab ee keeni kara madax-xoqid la’aan.
Samee ZIP skjalasafn – Haddii aad u baahato inaad bogto boggaaga, waxaad ka faa’iideysan kartaa faylka hal-fure "Ókeypis FTP" si uu u abuuro nuqullo ZIP ah oo loo diro wadooyinka maxalliga ah. Tani waxay hubineysaa inaad si dhakhso ah uga soo kaban kartid qaladaadka ogyo faylasha khalkhalka leh.
Maamulaha Guryaha – FileZilla wuxuu la shaqeeyaa maamulaha goobta oo kuu ogolaanaya inaad keydiso macluumaadka boggaaga FTP. Waxay leedahay ikhtiyaari ah í la xiri karo xirmooyinka FTP, iyadoo la adeegsanayo aqoonsiyada innskráningu, og tilmaamida xiriirada SFTP.
Xaddidaadda Xawaaraha Khaaska ah – Ef þú vilt að Walwalsan verði FTP í gegnum netið, þá geturðu notað internetið, þú getur notað xaddidaadaha xawaareynta ee ka dhex samfélagið fyrir FileZilla. Ef þú merkir ‘breyta’> ‘Stillingar’> ‘Beddelka’ oo calaamadi "U oggolow xaddidaadaha xawaaraha".
Vafri-Ku Saleysan – Adiga oo ah fidiye dheeraad ah, waxaad bilaabi kartaa isticmaalka Firaaqada Firfircoonida dhexdeeda. Þú getur valið það sem þú getur notað til að bæta við þig í Firefox, en það er ficican og það er ekki hægt að nota það.
Isku xirka iyo dib udhigelinta tooska ah – Haddii ay dhacdo inaad lumiso xiriirka ku-meel-gaadhka ah, FireFTP si toos ah ayey u cusbooneysiisaa marka ugu horreysa ee xiriirinta internetka dib loo dhiso.
Raadinta Fudud iyo Síur – Viðmót FireFTP er hægt að miðja til að sjá um miðju síu síu kossa og sameina sömu upplýsingar og hægt er að merkja það. Waxay taageertaa xaddiga ráðinta ee horumarsan sida calaamad bannaan (–) loogu talagalay ka-reebista faylka, calaamaddaha dheeraadka ah (+) alaabta loo baahan yahay, iyo qiimaha ("") raadinta kalmado badan.
5. Guðbi 4
Faylka Xiriirka – Haddii aad isticmaasho qaab isku mid ah oo loogu talagalay lataliyeyaasha deegaankaaga iyo kuwa þoku, ka dibna isticmaalaya qaabka isku xirnaanta ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo maro labada gooboodba hal mar.
Sérsniðin tákn – Tani waxay noqon kartaa mid muuqaal ah, laakiin gudbin afar ayaa kuu oggolaaneysa inaad isticmaasho sawirro gaar ah oo loogu talagalay "kuwa ugu cadcad".
Sida bilawga adduunka ee macaamiisha FTP, eldur FireFTP og CyberDuck ayaa ah kuwa ugu murugsan fursadaha ugu wanaagsan. Ma aha oo kaliya inay fududahay in la isticmaalo, waxay wali bixiyaan sifooyin gaar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala bilaashka ah. FTP lacag la’aan ah sidoo grænkáli waa doorasho fiican oo bilawga ah, laakiin kaliya haddii aadan daneynin vaxkáli oo aan ahayn marka aad galiso server-kaaga FTP.
Farsamayaasha webka ee khibradaha leh, dhinaca grænkál, waxay heli mapa FileZilla oo waxtar leh madaama ay taageereyso mashiinnada badan. Ugu dambeyntiina, mulkiilayaasha bogagga oo hore u haystay gigabytes ee xogta online, þú getur notað 4 vikur og síðan í Bangi ugu Fiican ee buck.
אתר האינטרנט של Abuuritaanka יכול להיות בוורדפרס כדי לראות את הלוגו לגורי. Waxaad aragtaa